My Mister ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကtvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိတဲ့ My Misterဆိုတဲ့ongoing ကားလေးပါ
အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ မင်းသားက Lee Sun Kyunနဲ့ မင်းသမီးကIUပါ
စုစုပေါင်း ၁၆ပိုင်းပါဝင်ထားပြီး လက်ရှိမှာ ၄ပိုင်းထွက်ရှိထားပါတယ် ၄ပိုင်းမှာတင် IMDB 6.0/10
ထိ rating ရရှိထားတဲ့ကားလေးပါ
ဒီကားလေးထဲမှာဆို IUရဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ characterနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ
အသက်၄၀ကျော်အင်ဂျင်နီယာအိမ်ထောင်သည် အမေနှင့်အတူ,အလုပ်မရှိတဲ့အကိုတစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရူးရူးတဲ့ညီတစ်ယောက်နဲ့အစ်ကို၂ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ ပါ့ခ်ဒုန်ဟွန်း
ဒုန်ဟွန်းရဲ့ကုမ္မဏီကစီမံရေးမှုး ဂျွန်ယောင်း(Kim Young Min)နဲ့ရှုပ်နေပြီးတော့ ဒုန်ဟွန်းကိုကွာရှင်းချင်နေတဲ့ ပါခ်ဒုန်ဟွန်းရဲ့ဇနီးသည် ယွန်းဟီ(Lee Ji Ah)
အဘွားအိုကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အကြွေးတွေနစ်နေတဲ့ အသက်၂၀ကျော် ကောင်မလေးလီဂျီအန်
တစ်နေ့မှာတော့ ဒုန်ဟွန်းကို 50 million won ($50,000 USD) လက်ဆောင်လာပေးတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ ဂျီအန်ဟာသူ့အကြွေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုယူဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး
သူတို့နှစ်ယောက်အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ? ဘယ်လိုတွေကျော်လွှားကြမလဲ? ဆိုတာဒီကားလေးမှာကြည့်ရှုကြပါလို့
စစချင်းကြည့်ရင်ပျင်းစရာကောင်းတယ်ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ် သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမွန်းကြပ်မိမယ် စိတ်ပင်ပန်းမိလိမ့်မယ် အစပိုင်းမှာအဲ့လိုထင်ရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းကြည့်ရင်းနဲ့ ကြိုက်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
P.S ကိုယ်ကတော့ဒီကားမှာIU ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကော သရုပ်ဆောင်တာကိုကောသဘောကျမိတယ်
Translated by HMN,May Sit Min & May Zun Aung
==========The End ============
Starring: IU, Lee Ji-ah, Lee Sun-kyun, Na Moon-hee, Park Ho-san, Son Sook, Song Sae-byuk,